Tantano ny loko fanontana: Alefaso RBG mankany CMYK | Famoronana an-tserasera
Judit Murcia | | Graphic Design
Zava-dehibe ny hitadidiantsika fa ny loko eo amin'ny efijery (RGB) tsy mitovy fahitana amin'ny taratasy (CMYK). Alohan'ny handefasana a tetikasa farany raha hanao pirinty dia tsy maintsy maka antoka fa misy isika fanondranana fisie miaraka amina maody miloko CMYK ka ny loko farany ho akaiky araka izay azo atao ny zavatra hitantsika eo amin'ny efijery.
Na dia mandray ny fanondranana any CMYK aza, misy lafin-javatra maro izay afaka manova ny valiny farany. Ny karazan-taratasy izay safidintsika manonta, ny karazan'ireo cartridges miloko, ankoatry ny lafiny hafa izay mety hiteraka fanovana kely.
1 Loko pantone
2 Tranonkala fiovam-po
6 Mangataha fitsapana loko
El pantone dia heverina a fitaovana fototra ho an'ny matihanina amin'ny famolavolana sary. Izy io dia librería misy loko izay hiantohana fa manana ny loko irina isika, izany hoe, fanondroana loko io. Ireo rakitra izay alefanay hatao pirinty, na dia mpanonta pirinty hafa aza izy ireo dia hitazona loko mitovy.
Misy izany fitaovana an-tserasera izay hanampy anao hanova ny lokon'ny volanao amin'ny fanontana.
Miaraka amin'ity fitaovana an-tserasera ity dia afaka miasa ianao mba hamoronana ny firindranao sy ny lokonao miloko. A kodiarana miloko ahafahanao mifindra eo anelanelan'ny lokony, ny inks ary ny jirony. Mamela anao izany manandrama miaraka amin'ireo fitambaranareo manokana.
Adobe koa dia manana kodiarana miloko manampy antsika hahatratra ny loko idealy. Izany dia misy famakiam-boky palette iraisana avy amin'ny mpampiasa hampiasa sy hitahiry raha manana kaonty adobe ianao.
Izany dia fanitarana tena ilaina tokoa izay hamela anao hisafidy loko ao anaty pejin-tranonkala. Toy ny eyedropper ao amin'ny programa famolavolana, colorzilla mampahafantatra anay amin'ny tsindry tokana loko eo noho eo.
Maha- fanitarana, tsy maintsy ampidininao amin'ny browser-nao. Azo ampiasaina izy roa Chrome fa ny Firefox.
Mangataha fitsapana loko
Torohevitra iray izay, raha tsy fantatrao fa misy izany, dia afaka manampy anao amin'ny lafiny matihanina, dia ny mangataka a fitsapana loko maimaim-poana. Io dia hahafahantsika ialao ny olana miaraka amin'ny fitantanana loko. Mpanonta printy maro no hitondra azy ireo tsy misy olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Fitantanana loko ho an'ny fanontana